Ikhompyutha Desk YF-GD002
IDizayini Yesikhashana: Ibushelelezi futhi yesimanje, leli tafula lekhompyutha lasekhaya elimhlophe liyinhlanganisela ephelele yokusebenza, ukuqina nokuklama ngendlela yesimanje.
Ideski lekhompyutha lokubhala elilula nelicwebezelayo lehhovisi lasekhaya
Ngaleli tafula lesikhathi samanje, kulula kuwe ukuthi wakhe i-home office yamaphupho akho.
Ideski lamakhompiyutha lanamuhla lehhovisi lasekhaya
Leli deski eliyingqayizivele lesikhathi samanje lifaka ikhabethe le-4 drawers, elingaba ngakwesokunxele noma ngakwesokunene elixhomeke kuzidingo zakho.
White melamine ekhaya ihhovisi computer etafuleni nge zangaphansi 4 ifenisha yasekhaya noma ifenisha yasehhovisi
Leli deski elenzelwe ubuncane liza namadilowa ama-4, itreyi lekhibhodi eli-1, kanye neshalofu elilodwa lokugcina elivulekile elingafinyeleleka kalula kumaphepha akho noma ezinye izinto ezidingekayo.
Ideski lamakhompiyutha lesimanjemanje lehhovisi lasekhaya elinedrowa elilodwa, ikhabethe elivuliwe elingu-2, ishalofu elingu-1 eliphansi
Leli tafula lamakhompiyutha elihlanganisiwe liyisinqumo esihle ekamelweni lokulala, ehhovisi lasekhaya, efulethini elincane, noma egumbini lokulala, lingabekwa ekhoneni noma kunoma yiluphi udonga ukuze lisebenzise ngokugcwele isikhala futhi lilethe impilo yakho kalula.
Ingasetshenziswa njengokubhala amadeski, izikhungo zokusebenza, amatafula enkomfa, amatafula ekhompyutha / e-laptop.
Ikhomishini yasekhompyutheni yasekhaya yesitayela sekhompiyutha l shape ngeshalofu elivulekile
Leli tafula lamakhompiyutha isitayela sesimanje futhi esisesitayeleni, liza nedeskithophu e-1, namashalofu ama-3 avulekile.
Ideski lekhompiyutha elenziwe ngo-l lakhiwe ngeshubhu lensimbi engenasici esindayo ne-Hollow-Core Panel eqinisiwe, i-MDF melamine veneered okuwubufakazi bomlilo, ubufakazi bamanzi, ne-anti-scratch.
Ikhompyutha Desk YF-CD003
Ideski lasekhaya lesimanje lasekhaya lasekhaya elikhulu le-L shape ekhoneni lekhompyutha enesifuba sedilowa.
Ngokubukeka kwesimanje nokuklanywa okucabangayo: Leli deski linemigqa yesimanje nokubukeka kwesitayela okugcwalisa noma yikuphi ukuhlobisa kwasekhaya.
Ikhompyutha Desk YF-CD002
Ikhoneni lasekhaya lehhovisi lasekhaya l lakhiwe ngokubhala ideski lekhompyutha lokufundela elineshalofu
OKWENZEKA NGOKWENZEKA, Leli desk lesimanjemanje futhi elilula elimise okwe-L lakhiwe ngamapaneli wokhuni aqinile (i-E1 particle board) futhi litholakala ngemibala eminingi ebusweni be-melamine laminated. (White, oki, walnut).
I-YF-H-209 Modern 3 Drawer White Black Lacquer Nightstand ngegolide
Awudingi ukuchitha ithani lemali ukuguqula ikamelo lakho lokulala libe yindawo yesitayela obukade uphupha ngayo, futhi lezi zingqimba zasebusuku ze-chic ziwubufakazi. Noma ngabe ufuna idilowa elilodwa noma amathathu…